Altlọ ọrụ Semalt SEO: Ilekwasị anya na nhụpụta na ọbụghị naanị njikọ njikọta anụnụ anụnụ
Mgbe a bịara SEO, ebumnuche kachasị nke weebụsaịtị niile bụ iru elu. Laa azụ n'oge ochie, ọ pụtara ịbanye "njikọ 10 na-acha anụnụ anụnụ." Ọ bụ ezie na ebumnuche “elu nke Google” agbanwebeghị ọtụtụ ihe maka ndị mmadụ, otu i si erute ya agbanweela nke ukwuu.
Tupu anyị abanye omimi, ọ dị mkpa ịghọta arụmụka nke na-aga kemgbe oge ụfọdụ na SEO. Njikọ iri na-acha anụnụ anụnụ a nwụrụ anwụ? Site na njirimara SEO ọhụụ na-apụta kwa afọ, azịza nke ajụjụ a nwere ike ịdabere na ebumnuche gị. Anyị ga-abanye nkọwa sara mbara n'okpuru.
Mgbe ị nụrụ ka onye ahịa ahịa na-ekwu maka njikọ iri na-acha anụnụ anụnụ, ha na-ekwu maka nsonaazụ iri kachasị elu na Google. Dabere na nyocha ahụ, peeji mbụ nke Google na-ewe ihe ruru pasent 75 ruo 95 nke okporo ụzọ. Nweta njikọ njikọ iri ahụ na-acha anụnụ anụnụ bụ ihe kachasị mkpa maka ịga nke ọma na Google. Ọ ka nma ịkari ụzọ atọ n’ime ụzọ atọ n’ime mmadụ iri karịa ka ị ga-ebe ụzọ otu ụzọ n’ụzọ anọ.
Njikọ ndị na-acha anụnụ anụnụ, mgbe a na-ekwu maka onwe ha, bụ ụzọ ọzọ ịsị nsonaazụ ọchụchọ. Mgbe ịlele nsonaazụ nchọta nke nchọta (SERP), njikọ na-acha anụnụ anụnụ anaghị etinye nsonaazụ akwụ ụgwọ, ngalaba ihe ọmụma, yana ihe ngosi ị na-ahụ n'elu ma ọ bụ n'akụkụ nso.
Mgbakwunye Blue adịghị mkpa na-achụso na SEO nke Oge A?
Nyere na nsonaazụ mbụ nke iri na Google ka na-enweta nnukwu okporo ụzọ, a ka nwere nnukwu ọrụ iji na-achụso ha. Mpempe akwụkwọ ndị a gosipụtara na mbido eburula nnukwu ụlọ dị na peeji nke dị n'ihu. Zọ kachasị mma iji mee ihe ndị a abụghị izere ha, kama iji ya dịka eburu n'uche.
Kedu ka m ga-esi banye na mpaghara ihe ngosipụta?
Ndị jisiri ike banye mpaghara ihe ngosi egosipụtara ga -agbagide ọnụego pịa ha. Ebumnuche gị bụ ịbanye mpaghara ahụ. Dịka ọ bụla oru ngo SEO ọ bụla, ajụjụ nwere ike gbagwojuru anya. Ma, enwere ụfọdụ omume SEO kachasị mma ị ga-eburu n’uche nke ga-enyere gị aka.
Lezienụ anya na usoro
Google crawlers, ma ọ bụ AI nke na-enyocha ebe nrụọrụ weebụ maka njikarịcha, na-ahọrọ mgbe a bịara n'ịhazi ya. Site na ịtụle usoro nke ga-abanye na ngalaba ndị a, ị ga - enwe ezigbo echiche etu esi amalite. Ka anyị were otu ihe atụ: etu esi akpọọ nkụ.
Anyị ga-enyocha ụdị ngwa ihe dị iche iche ma emechaa, mana ihe atụ a na-enye anyị Ezi ntụziaka na akụkụ Q&A. Cpinye nke ọ bụla n’ime ihe ndị a ga-ekpughe ndepụta ndị edepụtara. Ndepụta ha edepụtara enweghị akụrụngwa iji ghota usoro ọgụgụ Google. Ahịrị ahịrịokwu ha kwụ ọtọ ma dịkwa mfe ọgụgụ. Ing pịgharịa n'okpuru ga-ekpughere ndị ọzọ ihe atụ. Ndị a gụnyere vidiyo, ndepụta itolu, na paragraf ọzọ.
Will ga-achọpụta na ụfọdụ weebụsaịtị ndị a siri ike na iji akara aha ha. Site na iji akara H1, H2, na H3 dị ka usoro ịhazi oke, ị na-agbaso omume kacha mma SEO. O yikarịrị ka Google ịhọrọ paragraf 50 okwu n'okpuru isi H3 nke na-eme ka azịza dị mfe.
Lezienụ anya na ọdịnaya ahụ
Snippets egosipụtara bụ maka ịza ajụjụ. Ajuju ndi a bu nsogbu ndi mmadu choputara na Google. Ajụjụ ndị a nwere ike ịza.
Ọ bụrụ na ị na-arụ onye ohi na nnukwu obodo, ụzọ kachasị mma ndị mmadụ nwere ike isi chọta gị bụ site na eti SEO. Site na ịdọta ndị mmadụ na ebe nrụọrụ weebụ gị, ịchọrọ ịnye ọtụtụ isiokwu gbasara otu esi eme nwa atụrụ nke ọma. Mgbe ituchara uche n’uzo banyere njikwa anụ, ihe ntanetị, na nsonaazụ google, ị ga-ahụ ọtụtụ ajụjụ ị ga - aza.
Ọ kachasị mma ịghọta otú onye ahịa ahụ ga-esi jụọ ajụjụ. Nzube a ga - ewetara gị ndị mmadụ. Inwe “ihe kachasị mma n’obodo” bụ atụmatụ a gaara arụworị afọ iri anọ gara aga. Iji nweta ndị ahịa taa, anyị ga-ewepụta onwe anyị dịka ọkachamara pụrụ ịtụkwasị obi n'okwu a. Blog nwere ụzọ dị mfe iji mee nke a.
Debe Ezigbo Stuff Gị N'ihu
Ọ bụrụ n’ịlele akwụkwọ akụkọ na mgbasa ozi kemgbe otu narị afọ gara aga, ị ga-ahụ otu isiokwu a na-anụkarị. Ndị nwere ọzụzụ na mpaghara ndị a ga-agwa gị ihe akpọrọ Pyramid nke azụ. Pyzọ pyramid a gbanwere agbanwe bụ ihe ndị na - ede akụkọ na - eji eme ihe mgbe ha tinyere ọdịnaya ha kacha mma. Mgbe anyị tinye arụmụka a na ndị isi anyị H2 na H3, Google ga-amata nke a.
May nwere ike na-eche na ọrụ gị dị ka onye nwere azụmahịa bụ ime ka ha na-eche banyere ngwaahịa gị ruo ogologo oge o kwere mee. Mana nkezi mmadụ lere anya oge asatọ bụ sekọnd. O buru na isi okwu gi adighi nma ha, i ghafuola.
Ọ bụrụ n’itinye arụmụka a na blọọgụ gị, ị gaghị ahụ usoro nke blọọgụ n’ihu, na - ebugo ozi niile bara uru. Will gha hu na isi okwu obula dika ajuju, nke nlebara anya n’azịza ya. Usoro ha nwere ike ịbụ ifesa ozi bara uru iji duga azịza ya. Na agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị mmadụ nọrọ ogologo oge, ha ga-enwe obi ụtọ ịchọta ngwa ngwa ngwa ahụ ebe ọzọ.
Kedu ka Semalt ga - esi nyere m aka na nke a?
Ndị otu ọkachamara nke Semalt maara nke a. Site na nkuzi banyere omume kacha mma nke SEO, Semalt ga - eji ohere ndị a mee ihe site na ịdebere isi okwu. Site n’itinye mkpụrụokwu ndị a na mpempe akwụkwọ ngosipụta ndị ahụ, ị ga-anọ n’etiti elu maka ọchụchọ ọchụchọ akọwapụtara.
Onwere okwu ighoro nke ulo oru na-acho ileghara anya. Site na ijikọta Keywords ndị a na snippets gosipụtara, ị nwere ike ịchọta onwe gị n'ọnọdụ dị mma iji nọrọ n'ọkwá maka igodo ndị ọzọ asọmpi. Gị na ọkachamara SEO na-akparịta ụka taa ka ị nwee ike ịmalite atụmatụ nke ime ihe iji mee ka ị nọrọ n'elu Google.
Kedu ụdị ofdị Dị iche nke Snippets Pụtara?
Mgbe ị na-elele ọdịnaya dị mma maka snippets egosipụtara, ọ dị mkpa ịghọta na enwere nhọrọ mgbasa ozi abụọ kachasị: ụdị na vidiyo. Otutu ihe anyị ga-agafe na ngalaba a dabere na okwu, mana vidiyo bụ ọwa ikwesiri ịtụle itinye mgbakwunye mgbasa ozi gị. Vidiyo bụ ọrụ Semalt na-enye. Anyị ga-agafe mpaghara anọ.
Nsuso ma ọ bụ ọnụọgụ
N’anya na-adọrọ adọrọ
Mgbasa ozi na-eto eto
Adịghị eduga na ebe nrụọrụ weebụ gị
Ahụmahụ nnweta chọrọ ihe ndezi
Ego di elu
Google, ebe ọ bụ onye nwe YouTube, nwere mmasị ịkwado akara ha. N’ihi nke a, snippets YouTube bụ ụzọ kachasị mma iji zube ndị mmadụ. Epeepe ndị a anaghị eduga ndị mmadụ na saịtị gị, mana ọ na-eduga ha site na “ngọngọ” nke nwere ike ịlaghachi na saịtị gị. Usoro a nwere ike ọgaghị abụ nsogbu, mana ị na - atụfu ndị mmadụ karịa ị ga - agbada n'isi.
Ederede vidiyo bụkwa usoro mgbagwoju anya nke nwere nnukwu ego eji etinye ego n'ihu. Youkwesiri igosipụta ebe ọkachamara n'ime azụmahịa gị ma ọ bụ ezinụlọ gị. Ikwesiri igosipụta ebe ahụ. A ga-achọ onye editọ ka ọ gbaa mbọ hụ na ị mepụtara ọdịnaya tozuru oke. Ọ bụ ohere magburu onwe ya, mana ọ kachasị mma maka ndị ọkachamara nwere ọgụgụ isi.
Nnukwu ihe ọmụma
HTML nwere ike ịdị aghụghọ
Enwere ike ile anya na Google karịa nke dị na peeji gị
Enweghi mkpesa mmetụta uche
Mbelata tebụl dị mma, ihe ndị data na-adọrọ pụrụ iche. “Odiche” a sitere na eziokwu na ọtụtụ weebụsaịtị enweghị ike ịgụnye usoro ndị a nke ọma. Ọtụtụ na-eche na ị ga-etinye tebụl na saịtị gị iji rite uru ndị a. Mana data ọ bụla etinye na ogidi na ahịrị nwere ike ịdaba ụgwọ ahụ.
Ọtụtụ ihe mere ị na-anaghị ahụ okpokoro anya bụ enweghị enyemaka obi ha. Peoplefọdụ ndị anaghị enwe mmasị ịhụ setịpụrụ data. Ọzọkwa, HTML iji mepụta ihe ndị a chọrọ ntakịrị nyocha. Ndị na - amaghị isiokwu ahụ nwere ike ha agaghị achọ ịhọrọ nhọrọ a.
Ọ dị mfe ịmepụta
Na-enye ozi kachasị
Nwere ike itinye oku ime ihe (CTA)
Na-atọ ụtọ karịa ịgụ
Ọ naghị apụ apụ
Choo ogologo ederede
Paragraf snippets bụ ndị nwere nnukwu ederede ederede. Ha na-agbadata n'okpuru H3 dị ka azịza nye ajụjụ a jụrụ n'isiokwu ahụ. Ọ na - enye ọtụtụ ozi ma na - enye ohere kachasị maka ịgụnye CTA.
Ndị a bụ ntakịrị ihe na-adọrọ mmasị maka ndị na-agụ ya. N'iburu n'uche ntụle uche nke asatọ na nke abụọ akpọtụrụ aha na mbụ, ịnwere ike iji paragraf mee ha. Ọzọkwa, Google yiri ka ọ nwere otu okwu ahụ. Ha nwere ike kpebie iwepu ederede ma ọ bụrụ na mgbanwe na algọridim ha kpebiri na ọ dị ogologo.
Nwere ike oke mmetụta
Mfe nghota usoro n’usoro
Nwere ozi amachaghị
Adịchaghị etinye ọnụ
Bulletted na listi mkpirisi ndepụta bụ nhọrọ nke abụọ na-enwekarị. Ha na-agho aka ozugbo, na-enye gị ndepụta nhọrọ ndị na-achọ ịza ajụjụ ndị a kpọrọ aha n'isi. Ha bụ usoro kachasị mma maka ịnye ntuziaka nke usoro. Ofdị agụmakwụkwọ a bụ ihe na-adọrọ mmasị nke ịnye ngwọta ozugbo.
Ogwe ndị ahụ na-abịa na nhọrọ ịhọrọ ọnụọgụ ma ọ bụ nke agbapụtara metụtara oghere. Ọ bụ ezie na mgbọ egbe ma ọ bụ ọnụọgụ nwere mmetụta ọfụma, ịhụ ndepụta ndị a ga-amalite ịghọ ebe niile. Ọzọkwa, mgbọ egbe ma ọ bụ ọnụọgụ nwere obere ohere iji leba anya n'okwu ndị gbagwojuru anya.
Njikọ igwe iri na-acha anụnụ anụnụ nke anyị maara dị ala karịa ndepụta, eserese, vidiyo, na oge Q&A na elu igwe na-achọ ihe. Ezie na oke ke iri iri ka dị oké mkpa maka ihe ịga nke ọma, na-akụ ihe ngosi ndị a egosipụtara dị ka ihe dị mkpa na-abawanye visibiliti. Ọ bụrụ na mmadụ nwara iwere nọmba gị nke mbụ ya na vidiyo ma ọ bụ paragraf, ọrụ gị bụ ebumnuche maka snippets ndị a.
Awarenessmata ihe ndị edepụtara n’elu, ị ga - enwe ike lebanye ụzọ mgbasa ozi abụọ kachasị mkpa iji melite ikike gị ịbanye na ngwa ngosi ndị a egosipụtara. Ejikọtara ya na ndị otu Semalt nke ndị ọkachamara SEO, ebumnuche gị nke iru elu Google dị nso. Maka inweta nkọwa ndi ozo, biko gakwuru ndi oka mmuta taa.